Ivontoerana Safidy: “Nihatsara ny fizotry ny fifidianana” | NewsMada
Ivontoerana Safidy: “Nihatsara ny fizotry ny fifidianana”
Nambaran’ny Ivontoerana Safidy, mpikamban’ny fiarahamonim-pirenena, omaly, fa nizotra araka ny tokony ho izy ary nihatsara ny fizotry ny fifidianana fihodinana faharoa, androany 19 desambra, raha miohatra ny tamin’ny fihodinana voalohany.
Niainga tamina biraom-pifidianana (BV) miisa 470 miparitaka amin’ny distrika 31 ao anatin’ny faritra fito iasan’ny Safidy ny fanaraha-maso (Amoron’i Mania, Analamanga, Androy, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Boeny, Sava). Nahatratra 32% ny mpifidy nandray anjara hatramin’ny 12 ora raha 44% izany tamin’ny fifidianana fihodinana voalohany, tamin’io ora io ihany. Nahitana delegen’ny kandidà ny 85,3% ny BV: 84,5% ny an’ny laharana 13 ary 81,5% ny an’ny laharana 25.
Nisy mpanara-maso vahiny sy teratany40,2%-n’ny BV, ankoatra ny Safidy. Afaka niditra tsy nisy sakantsakana ny mpifidy tamin’ny 98,3%-n’ny BV. Nahitana mpifidy tsy ara-dalàna kosa ny 6,4% tamin’ireo BV narahi-maso.
Hatramin’ny omaly hariva, mbola nitohy nandray ny tatitra momba ny fizotry ny fifidianana ny Safidy ka naharay tranga 38 ny Cellule de veille eo anivon’ity ivontoerana ity.
Tranga nampalahelo kosa ny niseho tao Ankazoabo, Atsimo Andrefana, namoizana mpikambana roa tao amin’ny BV.